Samsung USB Drivers ကို Download လုပ်ပြီး Samsung Kies ကိုမေ့လိုက်ပါ Androidsis
ပါပလော Aparicio | | Samsung, လဲ tutorial
အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့, install လုပ်ဖို့ Samsung က USB ဒရိုင်ဗာ Samsung စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခုအတွက်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မှန်ကန်သောအနေဖြင့် Kies ဟုခေါ်သောကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ Android အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကလွတ်လပ်မှုပဲဆိုရင်ဒါရိုက်တာတွေတပ်ဆင်ဖို့ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီဆော့ဗ်ဝဲအမျိုးအစားကိုအတင်းအကျပ်တပ်ခိုင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော့်ကိုချုပ်နှောင်ထားချင်တာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်မှာ Samsung အမှတ်တံဆိပ်မိုဘိုင်းပစ္စည်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုဆက်သွယ်လိုပါကတစ်ခါတစ်ရံတွင်သာလိုအပ်သည် Samsung driver ကို install လုပ်ပါ
Android တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် developer community မှမည်သည့်အရာကိုမဆိုအောင်မြင်နိုင်သည်။ မလိုသည်မှာ Samsung ကို install ရန်မလိုအပ်ပါ Kies။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာသည်ယာဉ်မောင်းများသာဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ယာဉ်မောင်းများကိုသာတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ Samsung ကသူတို့ကိုဘယ်ကရမလဲ၊ ဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်။ ဒါကြောင့်ဆမ်ဆောင်းကကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုနှုတ်ဆက်ဖို့။
1 Samsung Kies ဆိုတာဘာလဲ?
2 Android အတွက် Samsung ဒရိုင်ဘာကဘာတွေလဲ။
3 Samsung USB Drivers ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ
3.2 Samsung USB Drivers package အသစ်ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
Samsung Kies ဆိုတာဘာလဲ?
နှိုင်းယှဉ်မှုများသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော်လည်းကျွန်ုပ်လုပ်မည့်အရာတွင်မူ၊ ကစ္စသည် Samsung iTunes။ iTunes သည်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းကမ်းလှမ်းသော်လည်း iPhone တွင်တေးဂီတ၊ စာရွက်စာတမ်းများထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်စနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းကဲ့သို့သောအရာအားလုံးကိုစီမံရန်ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသူများကိုမုန်းတီးသည့် iTunes ကိုအသုံးပြုရမည်။ ကျနော်တို့ကိုဖတ်ရှုအဖြစ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Samsung မှ«Samsung Kies သင်၏မိုဘိုင်းကိုသင်၏ PC နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ၊ ကိရိယာများအကြား data ထပ်တူပြုခြင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး application အသစ်များကိုရှာဖွေပါ"။
ကျနော့်အမြင်မှာ မျှဝေဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူသောနှင့်အတူ Android မှာဘာမှမရှိဘူး၊ Samsung Kies ကိုသူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာတပ်ဆင်ချင်တဲ့သုံးစွဲသူအနည်းငယ်သာရှိမယ်ထင်တယ်။ ဒီဆောင်းပါးကဒီကိစ်စမှာကူညီဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။
Android အတွက် Samsung ဒရိုင်ဘာကဘာတွေလဲ။
ဤသည်မှာအတွေ့အကြုံမရှိသောသုံးစွဲသူများစွာကကျွန်ုပ်တို့အားမေးမြန်းသောမေးမြန်းချက်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး က Controller ကိုထက်မပိုသည်ထက်လျော့နည်းသည် ကားမောင်းသူပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကစပိန်စကားလုံးပါ။ RAE တွင် "driver" ဟူသောစကားလုံးမပါရှိသော်လည်းကွန်ပျူတာအကြောင်းပြောသောအခါ "Controller" ဟူသောစကားလုံးထက် ပို၍ အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် "PC" ဟုပြောခြင်းသို့မဟုတ်ရေးခြင်းကဲ့သို့စပိန်ဘာသာတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အခါကမျှအသုံးမပြုရမည့် "Personal Computer" ကိုဆိုလိုသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ ကွန်ပျူတာကိုပြောမယ့်အစား“ ကွန်ပျူတာ” လို့ပြောရင်စကားလုံးရဲ့အစဉ်အလာကိုပြောင်းလဲခြင်း“ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ” လို့ပြောလိမ့်မယ်။
Driver (Device Driver မှ) သို့မဟုတ် Driver (Device Driver မှ) သည်သေးငယ်သည် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ် ကခွင့်ပြုပါတယ် operating system ကိုတစ် ဦး ရံနှင့်အတူဆက်သွယ် (CPU တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အရန်နှင့်သီးခြားလွတ်လပ်သည့်စက်သို့မဟုတ်ကိရိယာ)၊ ဟာ့ဒ်ဝဲမှထုတ်ယူခြင်းနှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုရန် interface ကိုပေးသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် operating system တစ်ခုသည် external device တစ်ခုကိုအသုံးပြုနိူင်ရန် ၄ င်းကိုဆက်သွယ်ဖို့အထူး software လိုအပ်တယ်။ ဖြစ်နိုင်သမျှအငယ်ဆုံးသည်ဥပမာ -aကဲ့သို့သောမည်သည့်အရံပစ္စည်းကိုမဆိုသုံးရန်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကမမှတ်မိနိုင် ဝဘ် cam၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့အတူစီဒီတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ software ကိုကျွန်တော် install လုပ်ရတယ်။ မဟုတ်ပါကများသောအားဖြင့် (XP မှ) များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ကင်မရာတစ်ခုရှိသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသော်လည်းအလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ စီဒီပေါ်လာသည့်ယာဉ်မောင်းများ (၎င်းတို့သည်လက်ရှိထုတ်ကုန်အချို့တွင်ပါ ၀ င်သေးသည်) ကင်မရာကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်။
Samsung USB Drivers ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ
တရားဝင် Samsung driver များ၏မူကွဲအသစ်ကိုမထည့်သွင်းမီ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်ယခင်က install လုပ်ခဲ့ဖူးသောဗားရှင်းအဟောင်းများကိုရိုးရှင်းစွာဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ဤသန့်ရှင်းမှုကိုပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါမည်။
Windows Control Panel ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။
Control Panel ထဲ၌ရှိသောအခါတွင်“ ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းပရိုဂရမ်များ” ကိုရွေးပါ။
ပြီးရင် Samsung Mobile driver အဟောင်းကိုနှိပ်ပြီး Uninstall / Change ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ထုတ်ချင်သော driver package ကိုထပ်မံနှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
uninstallation လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါက driver pack အသစ်ကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အသင့်ရှိနေသည်။
Samsung USB Drivers package အသစ်ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူလျှင် Samsung driver package အသစ်ကိုတပ်ဆင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ ၎င်းသည် executable file ဖြစ်သောကြောင့်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကသူတို့ကို download လုပ်လိုက်ပါ ဒီနည်းကို Link, ဖိုင်ကို run နှင့် prompts ကိုလိုက်နာပါ installation wizard ကိုအားဖြင့်ပြသ။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုသင်ယခင် link မှ driver များကိုသွင်းပြီးသင်၏ Samsung device ကိုသင်မသုံးနိုင်ပါကအခြား USB Drivers များကိုလည်း download ရယူနိုင်သည်။ ဒီနည်းကို Link.
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မှ Windows ကို 8 ယာဉ်မောင်းကဏ္ section သည်အလွန်တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်နှင့်အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက်မည်သည့်အရံပစ္စည်းများအလုပ်လုပ်ရန်ဘာမှတပ်ဆင်စရာမလိုတော့ပါ။ Windows 2012 မတိုင်မီအထိ (ဂရပ်ဖစ်နှင့်အသံကဒ်အတွက်ဒရိုင်ဘာများပါ ၀ င်သော) Motherboard drivers များကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်တော့မလိုအပ်တော့ပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဖုန်းကိုတင်ချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ Samsung ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကိုဆက်သွယ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးလို့ပဲ။
သင်တပ်ဆင်ရန်စီမံပြီးပြီလား Samsung ကကို USB Drivers သူတို့ကိုအလုပ်လုပ်စေ?
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Samsung Galaxy S သည် odin မှတစ်ဆင့် firmware 2.3.6 နှင့်၎င်း၏ CF Root ကို update လုပ်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung ကကို USB Drivers
60 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
မတ်လ ၂၉ ဟုသူကပြောသည်
Mac အတွက်သူတို့ကိုဘယ်မှာ download လုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါဓာတ်ပုံ Francisco ကိုချစ်!
Mootzo Garcia ဟုသူကပြောသည်
ပို့စ်တွင်အဆုံးမှာနှင့်စာသားထဲမှာ link ကိုဖြစ်ပါတယ်
Nexus Gala ဟုသူကပြောသည်
ဒီလင့်ဟာပျက်နေပါတယ် ၎င်းကိုမတွေ့ရှိပါသို့မဟုတ်မတည်ရှိပါ။ link ကိုပြန်ထားနိုင်မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Nexus Gala ကိုစာပြန်ပါ
ဟီဆန်ကိုကို၊ ဒီ USB driver တွေကငါ့ကို samsung galaxy s3 ကို unlockroot program နဲ့အမြစ်တွယ်အောင်ကူညီပေးတယ်။ ဒီဟာကအသစ်အဆန်းပဲ။ အမှားမရှိဘဲအရာအားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ချင်တယ်
ဟုတ်တယ်၊ ကွန်ပျူတာကသင့်ရဲ့ terminal နဲ့ ၄ င်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုမှန်ကန်စွာအသိအမှတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်။
Samsung Galaxy GT-S5360L အတွက်သင့်တော်ပါသလား။
ငါထင်တာက Samsung Android စမတ်ဖုန်းတစ်ခုလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ 13/02/2013 10:03 တွင် "Disqus" ကရေးသားခဲ့သည်။
ငါမှာလည်း GT-S5360L ရှိတယ်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ PC က install လုပ်ထားတဲ့ driver တွေနဲ့ ... အဲဒါကိုအသိအမှတ်မပြုဘူး။
ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာတစ်ခုတည်း ရှိ၍ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကို pc မှမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်ကိုရှာမတွေ့ပါ။
မိုက်ကယ် Mtz ဟုသူကပြောသည်
ငါအတူတူပင်ပြproblemနာရှိသည်! D: amm သည် BCM21553-Thunderbird နှင့် CDC Abstract Control Model: C ကိုရှာမတွေ့ပါ
Micheel Mtz အားပြန်ကြားပါ
ဟယ် francisco၊ ငါမှာ ace gt-s5830m ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကွန်ပျူတာကမသိဘူး ငါ kies ထဲမှာမရှိသလိုငါ cel ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ပြုသကဲ့သို့ငါ samsung usb driver နှင့်ဘာမျှမဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏ကြီးသောအကူအညီအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ cozumel ထံမှနှုတ်ဆက်သည်
Carolina ficco ဟုသူကပြောသည်
carolina ficco သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်တွင် galaxy s တစ်ခုရှိပြီး kyes လည်းမဟုတ်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းအားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှအသိအမှတ်မပြုပါ
7.2 gt p3113 တက်ဘလက်အတွက် Samsung အလုပ်လုပ်ပါသလား။
ဂလက်စီ mini ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မလွယ်ဘူး ...
သငျသညျအကြှနျုပျကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။ hes ယခုငါဆဲလ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်လျှင်ငါ Samsung Galaxy လိုအပ်ပါတယ်လျှင်
galaxi mini သို့စာပြန်ပါ
Miguel Amezquita ဟုသူကပြောသည်
ငါအရင်ကလုပ်ပြီးပြီ၊ ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲ၊
Miguel Amezquita သို့ပြန်သွားပါ
Mariano + Arg + ဟုသူကပြောသည်
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရိုးရှင်းတဲ့၊ များပြားလှတဲ့သောက်စရာမလိုဘဲ၊ Samsung Kies ကိုထည့်သွင်းစရာမလိုပဲမင်းရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်။
Mariano + Arg + ကိုစာပြန်ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, !!!!!! ငါဖုန်းကို drop ဖို့ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် !!!
အဆင့်များမည်သို့ပြောရမည်ကိုပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာကို၎င်းကိုမထည့်သွင်းမီ usb နှင့်ချိတ်ဆက်ရပါမည်။ မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
samsung galaxy ace ကိုစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်
အိန်ဂျယ် pichardo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်အသစ်ဖြစ်သည်၊ samsung 5560 tocco မှသုံးစွဲသူ၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မနိုင်သိလိုသည်။
Angel Pichardo အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်တွင် Sansung S4 ဆဲလ်ဖုန်းရှိပြီး WIFI၊ တီဗီနှင့်ဆဲလ်ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းများ၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသူများဖြစ်ပုံရသောဖိုင်အချို့ကိုမတော်တဆဖျက်မိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုမည်သို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းရမည်သို့မဟုတ်ထိုယာဉ်မောင်းများကိုပြန်လည်ကူးယူရမည်နည်း။
သူတို့ android ပေါ်မှာဘယ်လိုထားကြသလဲ
ယေရှု Martinez ဟာနန်ဒက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
francisco ငါ့ပြသနာကငါ့ sansung galaxy s2 ဟာ pc နဲ့မဆက်သွယ်ချင်ဘူး၊ ငါမှာဒရိုင်ဘာတွေတပ်ထားတယ်။ ငါနည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ဘာမှမကြိုးစားခဲ့ဘူး၊ ငါ့ sansung galaxy ကိုချိတ်ဆက်ချင်တာကတော့ငါ့ရဲ့ android version မပါ။ ၄.၀.၄ သည်ငါ့ကိုကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိတော့ပါ
Jesus Martinez Hernandez အားပြန်ပြောပါ
အရာအားလုံးကို galaxy note2တွင်မည်သို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ အရမ်းစိုးရိမ်တယ်၊ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ မင်းကကောင်းတယ် are
ရာဖေးလ်ဟာနန်ဒက်ဇ် Uribe ဟုသူကပြောသည်
Rafael ဟာနန်ဒက်ဇ် Uribe အားပြန်ကြားပါ
Everardo Garcia Vazquez ဟုသူကပြောသည်
Everardo Garcia Vazquez အားပြန်ပြောပါ
ဟဲလိုပရိုဂရမ်ကို install လုပ်နေစဉ်မှာသူက device ကို disconnect လုပ်ဖို့ပြောတယ်။ တကယ်တော့ချိတ်ဆက်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ xfa အတွက်အဖြေပေးနိုင်မလား
Joshy ၈၇ ဟုသူကပြောသည်
Samsung SGH-i677 အတွက်အလုပ်လုပ်မှာလား။ ငါအရာအားလုံးကိုရှာဖွေပြီးပြီ။ ဆဲလ်ဖုန်းကိုမှတ်မိအောင်ငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမရနိုင်ဘူး !!! ...
Juan အီး Viveros ဟုသူကပြောသည်
ငါသူတို့ samsung galaxy tab3lite အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Juan E. Viveros ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ၏အနဂါးငွေ့တန်း၌ gt-s6310l ငယ်သည်အလိုအလျောက်ပြန်ဖွင့်နိုင်သည်။ “ Transfer files” တစ်ခုဖြင့် windows media player ကိုသုံးသည်။ fuck ¬¬
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းမှ wimdows xp ဗားရှင်းရှိသောကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသို့ဓာတ်ပုံများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည့်အဆင့်များကိုသိလိုပါသည်။ ဆဲလ်ဖုန်းကိုကွန်ပြူတာနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်လိုက်တယ်၊ စက်ကကျွန်တော့်ကိုမဖတ်ဘူး။ ငါလုပ်သကဲ့သို့
MILIANO A. အားစာပြန်ခြင်း
သင့်ရဲ့အလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါ့ရဲ့မိုဘိုင်းကို PC နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောစာမျက်နှာမှာပဲ။ မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီအလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ။ XD
ငါလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က Samsung Ace S-5830-M ကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး၊ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူတို့က Samsung Young GT-S-5360-L root ထည့်ထားပြီလို့ပြောတယ် ။
ငါဖွင့်တိုင်းတိုင်းမျက်နှာတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းသည် Samsung Young GT-S-5360-L အကွက်တစ်ခု၏ပျက်စီးခြင်းနှင့်တူသည်။
Joaquin Bresan ဟုသူကပြောသည်
Joaquín Bresan အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာ၊ ငါ့နဂါးငွေ့တန်း s3၊ táticlဟာ mementos အတွက်ပိတ်ဆို့နေတယ်။ ပြီးတော့လက်ကိုင်အောက်ပိုင်းoverရိယာကအရမ်းပူနေတယ်။ သူငယ်ချင်းတချို့ကတို့ထိရမယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမဲ့areaရိယာတစ်ခုလုံးကအလုပ်လုပ်နေတယ်။ operating system ကိုပြောင်းလဲပစ်, ငါနှင့်ပတ်သက်။ အကူအညီနဲ့တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
ဟင်နစ္စကို၊ ငါ့နာမည်ဟာနန်၊ ငါဗင်နီဇွဲလားပါ။ ငါ့မှာ Galaxy S4 ရှိတယ်၊ ငါက Android ပစ္စည်းအချို့ကိုဖျက်ပစ်ရမယ်။ ဖုန်းကိုငါဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ boot ကမပြီးသေးဘူး၊ အဖြူရောင်အလျားလိုက်အစင်းနဲ့အဖြူရောင်နယ်ပယ်မှာရှိနေမယ်။ ငါဘက်ထရီကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ touch ကအလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်သင့်လက်ချောင်းကို screen ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဖုန်းမြည်သံသို့လျှောသွားသောအခါဆူညံသံကိုမလုပ်ပါ။ အခြားအရာအားလုံးကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မိနစ်အနည်းငယ်လောက်မှာတော့ထိစရာမလိုဘဲကျန်တော့သည်
Marcelo P ဟုသူကပြောသည်
Bdia၊ ကျွန်ုပ် SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones (3) ပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ပါပြီ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာစနစ်က (Windows 10 home) ကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ "စီမံခန့်ခွဲသူကဤလျှောက်လွှာကိုပိတ်ဆို့ထားပြီ"၊ ၎င်းသည်စီမံခန့်ခွဲသူအနေဖြင့်လည်းအသုံးပြုပြီးကာကွယ်မှုနံရံများမှကာကွယ်မှုကိုပိတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ Samsung GT-S5570L ကိုချိတ်ဆက်နိုင်စေရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Marcelo P ကိုစာပြန်ပါ
Jairo Bermudez ဟုသူကပြောသည်
Jairo Bermudez အားပြန်ပြောပါ
ဟိုဆေး Sierra Diaz ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤဆောင်းပါး၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသဘောမတူခြင်းအတွက် ၀ မ်းနည်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ်အလုပ်များလုပ်နိုင်သည်ဟုထင်ပါသည်။ ပထမ ဦး စွာ၊ ဒရိုင်ဘာများကိုအခမဲ့မဟုတ်သော download server တွင်တင်ထားသည့်အတိုင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသိရှင်ကြားများ၊ သူတို့ကိုရရှိရန်ဒုတိယ၊ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးဗားရှင်းပင်မပါရှိဘဲ၎င်းသည်ဒရိုင်ဘာအထုပ်အသစ်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြသည်။ ၁.၅.၉.၀ ချိတ်ဆက်ထားပြီး၎င်းတို့သည် ၁.၁၅.၅၁.၀ တွင်ရှိသည်။ တတိယအချက်မှာ Samsung ဗားရှင်းနှင့်တရားဝင်ဗားရှင်းရှိသည့် link ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ငါအမှတ် XNUMX မှာညွှန်ပြသကဲ့သို့, ကြော်ငြာအပြည့်အဝနှေးနှေး download ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ
Jose Sierra Diaz အားပြန်ပြောပါ
jose miguel မှစာပြန်ပါ
ငါဒါတွေအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီ၊ ဒါပေမယ့် windows7ကငါ့ S2 ကိုမသိဘူး ကျွန်ုပ်တွင်ဗားရှင်း 4.1.2 ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် KIES ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါ၊ Wondershare Mobile သာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမသိသောပစ္စည်းကိုပြောပြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် SAMSUNG ဒရိုင်ဘာများအားနေရာချထားသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုလက်မခံပါ။
ငါအများကြီးကြိုးတွေကြိုးစားခဲ့ကြပြီးသူတို့ကအခြားမိုဘိုင်းဖုန်းကို detect လျှင်, ဒီတစ်ခုမဟုတ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Huawei p9 ဖိုင်များကို TV cable မှတစ်ဆင့် USB ကြိုးဖြင့်မမြင်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ဒရိုင်ဘာ၏မေးခွန်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စမှာကျွန်ုပ်သည် samsung galaxy j7 (2016) မှအဆက်အသွယ်များကိုဖျက်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
sm-j710mn ငါပြန်ချင်တယ်။ ငါဒရိုင်ဘာများနှင့်အတူငါအတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်ပြန်ဖတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအစစ်အမှန်ထိုသို့ပြုမှ။
ငါတစ်ခုခု install လုပ်ပေမယ့်ငါမအောင်မြင်ခဲ့ကြ
ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူး၊ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။
Samsung USB Drivers ကို Download လုပ်ပြီး Samsung Kies ကိုမေ့လိုက်ပါ
http://www.androidsis.com ဖုန်းများ› Samsung
ဤတရား ၀ င် Samsung USB Drivers များဖြင့်သင်၏ Samsung ကိရိယာကို Samsung Kies ကိုအသုံးမပြုဘဲသင်၏ကွန်ပြူတာနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဒီမှာယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါ။
Xiaomi Mi 5X ကိုဇူလိုင် ၂၆ ရက်တွင် MIUI 26 နှင့်အတူတင်ဆက်မည်
€ 50 ထက်နည်းသော HOMTOM HT90 ကိုဝယ်ပါ